XOG: Madaxda Dawlad gobaleedyada Galmudug & HIRSHABEELLE oo ku shiraya magaalada Nayroobi, maxayse ka hadlayaan? – Puntlandtimes
XOG: Madaxda Dawlad gobaleedyada Galmudug & HIRSHABEELLE oo ku shiraya magaalada Nayroobi, maxayse ka hadlayaan?
MUQDISHO(P-TIMES)- Madaxda dawlad gobaleedyada HIRSHABEELLE & GALMUDUG ayaa kulan ku gaar ah kuyeelanaya magaalada Nairobi ee dalka Kenya, oo ay kaga wada hadlayaan marxaladaha hadda soo wajahay Galmudug iyo siddii Waare garab u siin lahaa Mr, Xaaf oo ay hadda is hayaan dawladda Faderaalka ee Soomaaliya.
Wararka ayaa sheegaya in Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Xaaf maalmaha soo socda u safrayo magaalada Nairobi, isagoo la kulmaya dhigiisa Hirshabelle oo ay ka wada hadlayaan qorshaha ugu dambeeya ee arrimaha Galmudug.
Caqabado waa weyn ayaa hareeyey Galmudug, waxaana talaabadii ugu dambeysay si ba’an uga hor yimi kooxda Ahlu Suna oo sheegtay in aysan marnaba aqbali doonin qorshaha Xaaf ee ah in doorashadiisu ay tahay waqti dambe.
Ahlu Suna, waxay hadda doonaysaa in doorashada Galmudug la qabto waqtiga ay doonayso dawladda Faderaalka ee Soomaaliya, taasi waa dharbaaxo siyaasadeed oo xoog badan oo ku dhacday damacii Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Xaaf.
Madaxweynaha Hirshabeelle wuxuu dhawaan sheegay in aysan aqbaleyn in ladumiyo Galmudug, wuxuuna cambaareeyey ficilada dawladda Soomaaliya ay faragalinta ugu sameynayso maamulkaas, isagoo sheegay in looga baahan yahay in ay joojiyaan wax kasta oo dhibaato u horseedaya dhismaha maamulkaas.